PressReader - Isolezwe: 2017-11-13 - UTbo Touch akayikhulumi eyokuguqula umsakazo
UTbo Touch akayikhulumi eyokuguqula umsakazo
Isolezwe - 2017-11-13 - IZINDABA - MINENHLE MKHIZE
AKANAZO izinhlelo zokungena emoyeni uTbo Touch ongumsunguli weTouch HD esakaza kwi-internet.
UTouch ukudalule lokhu exoxa neSolezwe emcimbini obizwa nge-We are Football obusePeople’s Park.
Lo mcimbi bekungowokugubha iminyaka engu-25, iBafana Bafana yabuyiselwa emidlalweni yamazwe omhlaba ngemuva kokudingiswa ngenxa yobandlululo.
Ubuzimaziswe yizilomo zeBafana ezadla umhlanganiso kwi-Africa Cup of Nations (Afcon) ngo-1996 nezilomo zo-DJ okubalwa kuzona uDJ Fresh noDJ Tira.
UTouch obesakazela iMetro FM usungule isiteshi ngonyaka odlule.
“Umsakazo wami utholakala kwi-internent. Ukungibuza ukuthi ngizotholakala nini emoyeni kufana nokubuza abakwaJetta ukuthi izoshintsha nini ibe yisitimela. IJetta ayikwazi ukushintsha ibe yisitimela neTouch HD wumsakazo othokala kwi-internet. Njengamanje umhlaba wonke uphila nge-Internet. Umsakazo uyafa kodwa i-internent iyikho konke. Impilo yakho nje ikumakhalekhukhwini wakho. Uyawazi umehluko phakathi komsakazo otholakala emoyeni nomsakazo otholakala kwi-internet? Lezi yizinto ezimbili ezingafani futhi akumele abantu bazenze zifane,” kusho uTouch.
ITouch HD ibophele izilomo zabasakazi okubalwa kubona uTim Modise, Glen Lewis naye uTbo Touch oshayela uhlelo lwantambama olungena ngo-3 kuya ku-6 ntambama.
“Okuheha izilomo zabasakazi kuTouch HD wukuthi ziyabona ukuthi ikusasa livele lisemsakazweni ye-Internet. Akekho umuntu ofuna ukubambezeleka entweni endala. Empilweni kumele ukhule. Wonke umuntu ufuna ukukhula. Bayazizela, bazimisele ngokukhula,” kusho uTouch.
Lesi silomo siphinde saveza ukuthi sesibheke ukuvundulela ikhono elisha.
“Ngiyalithanda ikhono elisha. Intsha idinga ukunikwa amathuba. Buka senzani ngabasakazi abafana noNtando Duma. Musha futhi akekho obemnika ithuba. Ngifuna ukuvundulula ikhono elisha. Nginabasakazi abane abasha engibalethayo. Akekho owazi ngabo. Ngesikhathi ngiqala ukusakaza akekho owayengazi. Wonke umuntu ukufanele ukunikwa ithuba. Asikwazi ukulokhu siqhubeka ngabantu abaziwayo futhi ababodwa,” kusho uTouch.
Isilomo sezemidlalo uRobert Marawa sike samataniswa neTouch HD kodwa uTouch uyakuchitha ukuthi uke wakhuluma nalo msakazi.
“UMarawa ngumakhelwane wami. Abantu bahlale besibona sindawonye bese becabanga ukuthi uzojoyina isiteshi sami. Mina ngithatha isithombe nanoma ubani. Uma efuna ukujoyina umsakazo wami umnyango uvuliwe. Uyingwazi kwezemidlalo,” kusho uTouch.
SICELA niziqinisekise izinombolo eziwinile ezindaweni zeLotto ezisemthethweni. ISOLEZWE ngeke likuvumele ukuthathelwa izinyathelo zomthetho uma kwenzeke iphutha.
UMPHATHI wesiteshi iTouch HD, uTbo Touch, esemcimbini obizwa nge-We are Football obusePeople’s Park ngoMgqibelo